Tag Archives: Taxanaha Taariikhda
DHAGEYSO:WARBIXIN- Turkida iyo Duulaankooda Waxbarasho ee Soomaaliya.
Posted on March 14, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Wadanka Turkiga waxa uu kamid yahay dalal Soomaaliya kusoo qaaday duulaanka dhaqaale iyo mid wabarasho.
Iskuulo badan oo ay ku fidiyaan dhaqankooda iyo Luqadooda ayay ka fureen magaallo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho.
Iskuuladaasi waxaa lagu qaadaa astaanta Turkiga waxaana wax ku barta arday Soomaaliyeed.
Iskuulo caan ahaa ayay magacyada ka badaleen waxayna u bixiyeen magacyo Turki ah.
DAAWO FILIM CUSUB:Baardheere Maxay Baraaraha Ku Gaartay.?
War-baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan ayaa filim xiiso leh ka diyaarisay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo, kaasoo loogu magac daray (Baardheere Maxay Baraaraha Ku Gaartay).
Sida magaca laga dheehanayo wuxuu filimku soo bandhigayaa horumar dhan kasta ah oo ay magaalada ku tallaabsatay sida:- amniga, ganacsiga, wax barashada, caafimaadka, beeraha, bilicda iyo kuwa kale.
Qofkey muddo fog ugu dambeysay magaalada ee daawada filimkan wuxuu dareemayaa is badal weyn, halka qofka aanan wali arag uu su’aalo badan iska weydiinayo.
MUUQAALO & MAQAL:Baardheere Tii aan u maleynayay ma ahan.
Posted on January 4, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Ku soo dhawaada dhageystayaal qeybta koowaad ee barnaamijyo taxane ah oo aan kaga hadlayno magaalada Baardheere ee gobalka Gado.
Qeybta koowaad waxaanu kaga hadlaynaa amniga iyo xasiloonida bulshada haystaan iyo dhibaatooyinkii ay soo mareen.
Wariyeenna Cabdulaahi Yaasiin Jaamac (Cabdullaahi-soomaalI) ayaa dhawaan ku tegay socdaal shaqo oo todobaad qaatay Baardheere,waxaana barnaamijyadiisa uu ciwaan uga dhigay baar dheere tii aan u maleynayay ma ahan ee hoos ka dhageyso
Dhageyso Baardheere tii aan u maleynayay ma ahan qeybta 1 aad.
DHAGEYSO:-Barakac xoogan oo ka socda magaalada Mandheera.
Wararka ka imaanaya magaalada Mandheera oo qeyb ka ah dhulka Kenya xooga kaga heysata Somalia waxey sheegayaan in barakac xoogan uu ka jira kadib markii shaqaalaha dowladda Kenya iyo kuwa hey’adaha gaalada Caalamka ee ku sugan magaalada cabsi xoogan ay ku abuurtay weerarkii dhawaan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ka fuliyeen duleedka magaaladaasi.
Kumanaan ruux oo isugu jira shaqaalaha iskuulada dowladda iyo kuwa caafimaadka ee Kenya ayaa isaga cararay magaalada’iyagoona sheegay iney nafsadooda u baqeen maadaama amniga magaalada uu yahay mid aan la isku haleyn karin.